free online iMovie uzo ozo
Apple kere pụtara na ọkaibe mmemme iji jide n'aka na ha ọrụ isi abawanye a oké ịgbatị. Mgbe ọ na-abịa iMovie mgbe ahụ, ọ pụkwara weere dị ka otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe mmemme iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Otú ọ dị ụfọdụ ndị ọrụ bụ nke echiche na iMovie ọzọ ga-enyoba iji jide n'aka na ọ bụghị nanị na ha arụmọrụ a na-anwale ma onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma. A nkuzi bụ ihe niile banyere n'elu 5 iMovie uzo ozo iji jide n'aka na oge awa nke mkpa ọ bụla nke ndị a nwere ike iji mee ka n'aka na arụ ọrụ na-mgbe etre mgbe niile.
Gịnị mere uzo ozo?
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ mee ihe niile iMovie metụtara oru ngo mmetụta ka ndị ọzọ omume nakwa iji jide n'aka na ha arụmọrụ a na-anwale na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe omume na nke a bụ onye ahụ e mepụtara eburu n'uche achọ na mkpa nke ndị ọrụ na ndị kasị mma n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na uzo ozo na-achọgharị dị ka ụfọdụ ndị echiche na iMovie na-adịghị eweta arụpụta ihe kasị mma mgbe na-adịbeghị anya nweta nkwalite maka otu ihe ahụ ha chọrọ iji tọghata ndị ọzọ omume ka ha na- na-abụghị nanị ndị kasị mma kamakwa jide n'aka na iMovie oru ngo na-replicated na kasị mma na n'ụzọ.
Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ngwaọrụ na-ebudatara iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The iMovie uzo ozo ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta irè nke usoro ihe omume a na-converted na kasị mma na n'ụzọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na omume na a ga-ebudatara na-enyocha ke zuru ezu na-ezighị ezi ma ọ bụ achọghị omume na-ebi ibudatara na arụnyere. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe na-arụpụta mgbe ọ na-abịa iMovie na oru ngo na-rụrụ na otu mmụọ na ịnụ ọkụ n'obi.
Esi ihe kasị mma?
Ọ bụ-ahụ kwuru na ibudata a omume ọ dị ezigbo mkpa ka e kwuru na na metrics ndị e dere na na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi na-atụle na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe tụnyere na-mere. Iji nweta ihe kasị mma nke mgbe niile ọ na-gwara iji jide n'aka na-esote nke nkuzi na-agụ na zuru iji na-enweta results ahụ ndị na-mma niile ugboro.
-Esonụ na-n'elu 5 uzo ozo ka iMovie iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-eme na otu mmetụta dị ka iMovie:
1. Anyị Video
Nke a na usoro e mepụtara site WeVideo nzukọ na emewo ka okirikiri nhọrọ ukwuu dị nnọọ zuru okè iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Ọ na-na-kwuru na e nwere pro version nakwa nke nwere mma atụmatụ agbakwunyere. Usoro ihe omume e mepụtara na a ọkachamara n'ụzọ.
Usoro ihe omume dị mfe iji na ike ijikwa nnukwu oru ngo nakwa
The n'ozuzu anya nke usoro ihe omume dị mfe ịghọta na iji jide n'aka na ihe kasị mma resuots na-enwetara.
Ọ na-e mepụtara Google na maka otu ihe ahụ ọ chọrọ dịghị iwebata dị ka Google nwere otu nke kasị mma na ọkaibe ọkachamara nke ụlọ ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na-abụghị nanị enyoba ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma online ọzọ ahụ bụ free nke na-eri.
Ọ bụ kasị online iMovie ọzọ na a na-eji ọtụtụ nde nke ndị ahịa n'ụwa nile.
The online obodo nke ndị nchịkọta akụkọ enwere na-enyere ndị ọrụ na oge awa nke mkpa na ihe iseokwu na-edozi n'ụzọ dị ịrịba ama ngwa ngwa.
Ọ na-e mepụtara site na Magisto nzukọ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwa ọdịnala na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Mmepe emewo ka anya ọkachamara na nke a bụ ihe a onye ọrụ kwesịrị na nke a.
Ndị ọzọ na a haziri iji jide n'aka na akakabarede ọnụego bụ ngwa ngwa karịa mgbe.
The n'ozuzu anya nke usoro ihe omume bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-na akara na chọrọ nke oru ngo.
4. Video LAN nkiri Onye Okike
Iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe omume ebudatara na-atụ aro iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi Video LAN nkiri Onye Okike dị ka ọ bụ onye nke kasị mma na omume na e mere site creators nke Video LAN.
Ihe omume ahụ bụ free iji na a pụrụ inweta iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
The n'ozuzu mgbasawanye nke usoro ihe omume dị ukwuu na e nwere ndị nduzi dị iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Dị ka a na-abụghị linear nchịkọta akụkọ ọ na-akawanye arụpụta ihe kasị mma ma ọ bụ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike nweta ihe iMovie ọzọ nnọọ mfe. Ọ na-e mepụtara site na ShotCut nzukọ.
Ọ na-eme na àgwà nke video dị ka otu nke bụ tupu oru ngo e mere na ọ bụ ihe kasị mma mma.
The n'ozuzu Outlook nke usoro ihe omume bụ ihe kasị mma na ya mere ọ dị mfe iji.
> Resource> iMovie> Top 5 free online iMovie uzo ozo